I-European Union izakuphanda i-Apple ngezikhalazo zokukhuphisana kweSpotify | IPhone iindaba
I-European Union iphanda i-Apple ngezikhalazo zokhuphiswano lukaSpotify
Kwiinyanga ezimbalwa siza kuba nakho ukuvavanya okutsha Apple TV +, Inkonzo entsha yokusasaza ividiyo evela kubafana abavela eCupertino abafuna ukuguqula le ntengiso ikhokelwa nguSpotify. Iimarike ngokungathandabuzekiyo ekhokelela amakhwenkwe eCupertino kwiimfazwe ezintsha zokusasaza, Imfazwe entsha enezinto ezininzi zokuvota eziya kuthi zipheliswe kanye njengemfazwe phakathi kweApple kunye neSpotify eyenzayo kwintengiso yomculo.
Kwaye ukuba imfazwe yomculo iyaqhubeka ukuvelisa iindaba namhlanje, into yokugqibela esithethe ngayo yayisisikhalazo esisemthethweni sokuba iSpotify yafaka kunye ne-European Union kumzimba okhuphisanayo. Kwaye kubonakala ngathi uphando luza kuqhubeka nonyawo ... Sifumene nje ukuba umzimba ofanelekileyo we-European Union kukhuphiswano usamkele isikhalazo sikaSpotify Kwaye sele eza kuphanda amakhwenkwe aseCupertino ngezi zityholo zokulwa ukhuphiswano. Emva kokutsiba sikunika zonke iinkcukacha zale mpikiswano malunga neApple kunye neSpotify.
Ikhutshiwe ngabafana abavela Ixesha lokugqibela. Banga ukuba i-European Union iqokelela idatha ngendlela i-Apple elawula ngayo ukhuphiswano kwiinkqubo zayo zokusebenza kunye nokunikezelwa kweenkonzo zedijithali abazinika abasebenzisi bazo. Uphando lokuba, njengoko sisitsho, Wazalelwa kwisikhalazo sokuba abafana beSpotify bafaka umbutho kukhuphiswano lwe-European Union. Ewe kunjalo, kumava kwezinye iimeko, olu hlobo lophando zihlala zithatha ixesha elide, yiyo loo nto kubonakala ngathi kuya kufuneka silinde ixesha elide ukubona isigqibo sokugqibela se-European Union.
Siza kubona ukuba iyintoni na le nto, akufuneki silibale ukuba ngaphandle kwesikhalazo sakho abafana baseSpotify bayakhula kubabhalisi abahlawulwayo kwaye sele benababhalisile abangaphezu kwezigidi ezili-100 intlawulo, amanani angaphupha u-Apple. Siza kubona, siza kubona ukuba yintoni yonke le nto, ndicinga ukuba iApple iyakugqibela ngokuhamba ngehupula kwaye iwele kwizicelo ze-European Union.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » I-European Union iphanda i-Apple ngezikhalazo zokhuphiswano lukaSpotify
I-WatchOS 6 iya kuba neVenkile yayo ye-App kunye namanqanaba amatsha
I-iPhone entsha iya kuphucula ukukhangela ngaphakathi ngaphakathi kwi-eriyali entsha